Somali - Letter, Student User Agreement, and Optional Protection Plan (Elem) - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Somali - Letter, Student User Agreement, and Optional Protection Plan (Elem)
Si Waalidka / Ilaaliyaha Ardayda gelaya fasalada 4 iyo 5 ee Fall 2019,
Dayrtan, ilmahaagu wuxuu heli doonaa iPad leedahay degmada-a waxbarasho taageero ee dugsiga iyo guriga. Dynamic Learning 1: 1 Access waxaa la aasaasay sida qaabka guud ee waxbarashada iyo technology ee Degmada 196 by howleed ee 2013. Ka dib markii sano ee dhisidda awoodda macallinka in 1: 1 fasallada beta iyo korodhsi ansixinta cod for maal ee aftida November 2015, iPad leedahay degmada-a la siin doonaa in arday kasta ee fasalada 4-12 si ay u taageeraan iyo kor loogu qaado barashada.
Ilmahaagu wuxuu heli doonaa iPad ah ee bishii kowaad ee sanad dugsiyeedka. iPads loo isticmaali karaa fasalka si uu u hago ardayda sheekaysiga dhalashada digital halka sameynta hababka iyo nidaamyada ka hor la keenay guriga. Macallinku wuxuu go'aamin doonaa marka ardayda guriga keeno qalabka.
Ka hor inta qaata iPad ee September, aad doonto u baahan tahay inay qaado talaabo saabsan waxyaalahan soo socda :
Tag FeePay aad account oo ay helaan 19-20 Heshiiska iPad User (Gr 4-12) aqbalaa ama 19-20 Heshiiska User iPad (Gr 4-12) hoos . In qalabkaan waxaad buuxinaysaa laba hawlaha.
Ogolaanshaha ama dadka gaalow ku Plan Protection Optional ah: Ma jiro wax qarash si ay uga qayb 1: 1 helaan la iPad leedahay degmada-a. Si kastaba ha ahaatee, haddii loo baahdo, qoysaska ayaa ka mas'uul ah kharashka dayactirka ama beddelka iPads burburay, lumay ama la xaday. Sababahan awgood, Qorshaha Optional Protection ah la bixiyo si qoysaska. Faahfaahinta ku saabsan Qorshaha Badbaadada Optional waxaa ku lifaaqan. Waxaad awoodaa inaad go'aan ka gaadho haddii aad rabto in aad aqbasho ama Hoos Plan Protection Optional ah. Ka dib markii October 16, 2019 qoys kasta oo aan dhameystirtay habka loo diiwaan galin doonaa sida loo diido qorshaha ilaalinta.
Heshiiska User Ardayga: Waxaa muhiim ah in ardayda iyo qoysaska in ay sameeyaan si tilmaamaha iyo waxyaabaha laga filayo ee ku qeexan heshiiska User iPad Ardayga (sample ku lifaaqan). Adiga iyo ilmahaaga u baahan doontaa in ay ku heshiiyaan in ay shuruudaha Heshiiska Student User ah in ay awoodaan in gurigaaga qalab ay leedahay degmada-qaadan taariikhda roll-out ah.
La xiriir dugsiga ilmahaaga haddii aad u baahan tahay caawimaad helitaanka FeePay.
In la sameeyo xeerarka qoyska iyo rajooyinka ku saabsan iPad guriga. Shaqee ilmahaaga (carruurtaada) si loo ogaado filayo ku saabsan su'aalaha soo socda. Waxa kale oo laga yaabaa in aad rabto in aad wada yeeshaan Plan Media Qoyska ( www.healthychildren.org/mediauseplan ).
Halkee iPad loo isticmaali karaa guriga?
Maxaa iPad ah loo isticmaali karaa?
Sidee dheer waa inaad on iPad guriga maalin kasta?
Halkee waa in qalabka lagu eedeeyay habeenkii?
Waad ku mahadsan tahay waqtiga aad u dhaqmaan on labada waxyaabaha kor ku xusan. Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah, fadlan la xiriir dugsiga iyo / ama macalinka ilmahaaga.
Ikhtiyaarka Qorshaha Badbaadinta Qalabka elektrooniga ah
Waa 20 dollar sanadkii qalabkiiba, waxa laga yaabaa inaad iibsato Qorshaha Badbaadinta si loo daboolo waxyeelaha soo gaadhaya iPadyada degmada oo loo qeybiyey ardayda oo ka mid ah Barnaamijka Teknolojiyada Waxbarashada Degmada 196. Qorshaha Badbaadinta waa ikhtiyaar ee kuma xidhna in ardaygu uu helo qalabka. (cuntada lacag la’aanta ah ama wax yar la bixiyo waxaa loo ogol yahay qoysaska u qalma qado bilaash ah ama lacag yar laga qaado).
Qorshaha Badbaadada waxaa laga iibsan karaa wakhti kasta inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Si kastaba ha noqotee, haddii la soo iibsado kadib qalab elektaroonig ah, qalabku waa inuu marka hore shaqaaluhu eegan si loo xaqiijiyo xaaladdiisa qalabka.
Haduu jabo, lumo ama la xado qalab degmada waa in isla markiiba loo gudbiyo shaqaalaha, iyada oo aan loo eegin haddii Qorshaha Badbaadada la iibsaday iyo in kale.
HADDII AAD GADATAY QORSHAHA BADBAADADA
Dhaawac aan ula kaca ahayn - marka hore waxaa ku jira ceymis dhamaystiran (qalabka ka samaynta u baahan iyo samayntaba) dhammaan qaybaha gudaha iyo dibaddaba oo ay ka mid yihiin:
Shaashadda iyo muraayadda LCD (lakabka hoose ee muraayada)
Mashiinka lagu dhagaysto
qalabka lagu ilaaliyo
FIIRO GAAR AH: Xaalado dheeraad ah oo khasaaraha lama filaanka ah wuxuu lagu qiimayey 40 doolar midkiiba, oo caymis isku mid ah. Haday ku dhacaan seddex waxyeelo oo isku mid ahi, ardaygu waa inuu u keeno qalabkiisa shaqaalaha ku takhasusay tiknoolajiyada maalin kasta dhamaadkeeda.
Xatooyada - waa inay ku jiraan warbixinta booliiska; Dhammaan qalabka elektarooniga ee degmada si loo yareeyo suurta galka tuuganimada loona joojiyo isticimaalka qalabka la xaday.
Maxaan ku jirin:
Dhaawac si kas ah ardaygu ugu dhuftay
Lumida qalabka (iyadoon loo gudbin warbixinta booliiska)
Xadhkaha/madaxa (hadii uusan warshadii samaysay bixinayn) - Qiimaha lagu Bedalaayo:
Mfiilada kampaniga Apple la dhaho = $ 19
Madaxa fiilada ee Apple = $ 19
HADDII AADAN U BAAHNAYN QORSHA KA HORTAGA
Qoyska ardaygu wuxuu mas'uul ka yahay kharashka bedelka ama samaynta (haduu lumo ama la xado) iyo dayactirka. Kharashka lagu beddelayo iyo dayactirka ugu badan waana sida soo socota:
galka ilaalinta = $50
daawaca ama jabida LCD = $135
daawaca ama jabniinka Muraayada = $95
Qorshaha Badbaadada ayaa laga iibsan karaa wakhti kasta inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay soo iibsatay ka dib markii soo saarista qalab elektaroonik ah, qalabka waa in marka hore la kormeera shaqaalaha si loo xaqiijiyo in ay xaaladda. Wixii waxyeelo ah, lumitaanka ama tuugada ka mid ah qalab degmada-soo saaray a waa in isla markiiba la sheegay inay xubnaha shaqaalaha ah, iyadoo aan loo eegin in Plan Protection la iibsaday.
Heshiiska Isticmaalaha Ardayga iPad
Iyada oo qayb ka ah Degmada 196 Helitaanka waxbarashada 1: 1, waxaa lagu siin doonaa qalab ay degmadu leedahay (iPad) si aad ugu isticmaasho guriga iyo iskuulkaba. Si buuxda loo isticmaalo qalabka degmada, waa lagama maarmaan ardayda iyo qoysaskooda inay u hogaansamaan tilmaamaha iyo waxyaabaha laga filayo ee hoos ku qoran iyo xaga danbe. Waxaad u baahan tahay inaad ogolaato shuruudaha hoos ku xusan oo aad ka buuxinayid FeePay si aad awood ugu heshid inaad u qaadato gurigaaga taariikhda loogu tala galay.
Fadlan ogow haddii aadan ku haysanin internet gurigaaga, ilmahaagu wuxuu wali wuu isticmaali karaa iPad-kiisa si u qabto ardaygu shaqadiisa. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha kale ee helitaanka internetka wirelesska ama Wi-Fi-ga ah oo qiimaha raqiis ah oo ayaa laga heli karaa iskuulka ilmahaaga.
Marka ardaygu helo qalab ay degmadu leedahay (iPad) ...
Waxaan qalabkan u isticmaali doonaa waxbarashada adoo isticmaalaya aan falanqeynaya macluumaadka, iskaashiga iyo isgaadhsiinta, xalinta dhibaatada, iyo horumarinta iyo abuuritaanka si kor loogu qaado waxbarashada.
Si aad u isticmaasho qalabka waxbarashada ...
Waa inaa keeno qalabka iskuulka maalin kasta;
Waa inaa waydiisto ogolaansho ama ka fakaro intaanan wax soo dirin oo aanan gudbin, ama isticmaalin macluumaadka qof kale sameeyey ama qoray;
ula xiriiraan dadka kale si mas'uuliyad ku jirto oo ixtiraam iyo naxariis leh;
soo dejiyo ama koobigareeyo barnaamijyada kaliya ee macallinku qorsheeyeen, iyo
inaan u isticmaalo qalabka si haboon inta lagu jiro waqtiga fasalka
Anigu waxaan daryeeli doonaa qalabka si aan u hubiyo in lagu soo celiyo xaaladii uu ahaa markii lay siiyey.
Si aad ugu ilaaliso qalabka xaalad fiican waxaan ...
ku hay galka degmadu kugu siiyey qalabka mar kasta;
waa ku raacsanahay inaan ku soo celiyo qalabka, galka iyo xadhkaha awoodda ee isla xaalad shaqeed sidii markii hore laygu siiyey;
La soo xiriiro macalinkayga ama maamulaha isla markiiba haddii qalabku uu lumo, la xado, waxyeelo u geysto, si ficil ahaan ah;
La shaqeeyso wixii warbixin boolis ah oo lagama maarmaan ah haddii qalabka la xado;
ku raacsanahay in aan ka mas'uul noqon karo kharashka dayactirka ama beddelidda wixii lumay ama waxyeelo ah oo dhacaya inta qalabka haysto;
akhri oo raac faahfaahinta ku saabsan Degmada 196 Daryeelka boga macluumaadka iPad;
noqodo qofka kaliya ee isticmaala qalabkan;
ku jajgareeyo guriga habeen kasta oo ka soo qaad qalabka subixii isagoo buuxa;
ku qaado boorsada iskuulka markaad tagayso ama ka soo socoto iskuulka;
Ka fogeeyo cuntada, dareeraha, magnadka/birlabta iyo kulaylka ama qabowga daran;
Ku masaxo iPad-ka maro qalalan markaad nadiifinaso ee uu wasikh noqoto, iyo
Dhigo iPad-ka meel amaan ah markaanan hayn.
Anigu waxaan dooran doonaa doorasho mas'uul ah oo ku saabsan iyo khadadka marka la isticmaalayo qalabka.
Si aad u sameyso doorashooyin wanaagsan markaad isticmaalayso qalabka waxaan ...
ixtiraamaan naftayda iyo dadka kale internetka isticimaalaya adigoo raacaya Isticmaalka Macluumaadka Aqbalida - Ardayda iyo Oggolaanshaha Ogolaanshaha Helida Ardayga iyo Isticmaalka Internetka;
u wargaliyaan qof weyn isla markiiba haddii aan ahay ama u ogaado qof iga caayaayo internetka;
ka shaqeeya akoonka lay xilsaaray aniga oo qaadanaaya masuuliyada dhamaan howlaha la xiriira akoonkayga;
u isticmaal kaliya kamarad iyo fiidiyowga ujeedooyinka manhajka sida loo ogolaado barnaamijka degmada;
ku xiro lambar marka aan la isticmaalayn;
oo kaliya la wadaagida koodhka iyo lambarka sirta ah waalidiintayda iyo shaqaalaha iskuulka;
Ilaali macluumaadka gaarka ah ee dadka iyo dadka kale arimahooda gaarka ah ee internetka dhexdiisa;
isu dheelitiro waqtigayga inta u dhexeysa qalabka isticimaalkiisa iyo dhaqdhaqa kale;
maskaxda ku hay in wixii aan u diro internetka ay tahay mid waligeed ku jiraysa oo ku daba soconaysa waligeed;
u ogolaadaan waalidkeyga/mas'uulka iyo shaqaalaha iskuulka in ay kormeeraan qalabka si aan u kormeero isticmaalka mar kasta oo aan ogaysiin, iyo
ixtiraamaya dhammaan codsiyada waalidkayga /masuulkayga iyo shaqaalaha iskuulka ee ku saabsan sida iyo goorta aan isticmaalo qalabkaygu
Ardayga: Saxeexa hoos ku yaalaa wuxuu sheegayaa inaad fahamsan tahay in xadgudubka heshiiskan isticmaalka ahi uu keeni karo talaabo tarbiyad ah la raacaayo nidaamka iskuulka iyo siyaasadaha degmada 196 ama lumitaanka isticmaalka qalabka iyo mudnaanta.
__Lagu sameeyay elektaroonig ahaan FeePay____
Qor Magaca Ardayga
Waalidiinta/Mas'uulada: Marka aan saxiixo, waxaan qirayaa inaan dib u eegay Heshiiska Isticmaalka Ardayga ee iPad-ka waxaanan daawaday waxaana daawaday macluumadka qalabka (https://goo.gl/2zwhz5) ilmahayga. Waxaan isku raacsanahay inuu masuul ka ahay kharashka dayactirka ama beddelidda wixii lumay ama waxyeelo ah oo dhacaya inta qalabka ilmahaygu haysto.
Qor Magaca Waalidka